KYAW CHAN NYEIN: Emotion Management & Mindful Compassion တရားပွဲသင်တန်း (Part6- A)
Emotion Management & Mindful Compassion တရားပွဲသင်တန်း (Part6- A)
🔯 မိနစ် နှစ်ဆယ်၊ နာရီဝက်လောက် relaxation meditation လုပ်ရအောင်။ ကိုယ့်စိတ်ကို အပန်းဖြေတာ။
★ ပင်ပန်းနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်၊ ပင်ပန်းနေတဲ့စိတ် coordinate (ဆက်စပ်မှုရှိအောင်) လုပ်ပေးတာ။
☆ Coordinate မလုပ်ရင် ခန္ဓာကိုယ် နားချင်တဲ့အချိန်မှာ စိတ်က မနားနိုင်ဘူး။ အဲ့ဒီလို ဆိုရင်လည်းပဲ အနားမရဘူး။ စိတ်က နားချင်တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က restless ဖြစ်နေတယ် (မနားရဘူး) ဆိုရင်လည်းပဲ နားလို့မရဘူး။
★ အခု တရားထိုင်တဲ့နည်းက ရုံးမှာလည်း ထိုင်လို့ရတယ်။ ကားပေါ်မှာ ကိုယ်က ကားမောင်းတာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ကားပေါ်မှာ အနားယူလို့ရတယ်။ ကားစောင့်ရင်းနဲ့၊ လေယာဉ်ပျံစောင့်ရင်းနဲ့ အနားယူလို့ရတယ်။
★ ကုလားထိုင်ပေါ် ထိုင်တဲ့သူတွေ၊
● ကျောမှီထားလိုက်။ ကျောမှီထိုင်။
● ခန္ဓာကိုယ်ကို တင်းမထားနဲ့။
ခန္ဓာကိုယ်ကို relax လုပ်ထား။ လျော့ထား။
● လက်ကို ပေါင်ပေါ်တင်ထားရင်လည်း ရတယ်။ ဘေးနားချထားရင်လည်း ရတယ်။
● လက်ဖ၀ါးကို လှန်ထားလိုက်။
● ၀င်လေထွက်လေ ကျကျနန ရှုရှိုက်ပေး။ (Slow & Deep breathing) ။
★ ခန္ဓာကိုယ် ပင်ပန်းနေတယ်။
အရက်ရက် အလလ အလုပ်လုပ်ခဲ့တာတွေ Stress Chemical (စိတ်ဖိစီးမှု) တွေ စုထားတယ်။
★ အဲ့ဒါတွေ တစ်နေ့ကို နည်းနည်း နည်းနည်းနဲ့ အရင် ရက်က ပင်ပန်းမှု၊ ဒီနေ့အထိ ပါလာတယ်။
အရင်အပတ်က ပင်ပန်းမှု၊ ဒီတစ်ပတ်အထိ ပါလာတယ်။
အရင်လက ပင်ပန်းမှု ဒီလအထိ ပါလာတယ်။
★ ပင်ပန်းနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို Register လုပ်လိုက်။ ခန္ဓာကိုယ် ပင်ပန်းနေတယ်။
☆ ပင်ပန်းနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို သွားပြီး အပြစ်မတင်နဲ့။ ပြီးတော့ resist (ခုခံတာမျိုး) မလုပ်နဲ့တဲ့။
Don't fight with the exhausted body. Just accepted. Look at it with compassion.
★ ကရုဏာနဲ့ကြည့်ပေးပါ။ ပင်ပန်းနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကရုဏာနဲ့ ကြည့်ပေး။
• ငိုနေတဲ့ ကလေးငယ်လေးကို မိခင်က ကရုဏာစိတ်နဲ့ ကရုဏာမျက်စိနဲ့ ကရုဏာနှလုံးသားနဲ့ကြည့်တယ်။
★ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ပင်ပန်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ကရုဏာနဲ့ ကြည့်ပေး။ ကရုဏာဆိုတဲ့ သဘောထား။ compassionate attitude ။ ဒီအသိနဲ့ ဒီအတွေးနဲ့ ကြည့်ပြီးတော့ ၀င်လေထွက်လေ ကျကျနနရှုရှိုက်ပါ။
• အိပ်ယာအစောကြီးထရလို့ ပင်ပန်းတာ ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။
• ည ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်လို့ ပင်ပန်းတာ ဖြစ်ရင် ဖြစ်မယ်။
• အလုပ်ပင်ပန်းလို့ ပင်ပန်းတာ ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။
• စိတ်ပင်ပန်းလို့ exhausted (ပင်ပန်းမှု) ဖြစ်ရင် ဖြစ်မယ်။
• ထမင်းစားပြီးကာစ ခန္ဓာကိုယ်က အစာတွေ ချေချက်နေရလို့၊ အင်အားတွေ အများကြီးသုံးရလို့ ပင်ပန်းနေတာ ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။
★ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒါ အမြဲတမ်းတွေ့နေရတဲ့ အနေအထားတွေပါ။ ဒါ အမြဲတမ်းတွေ့ကြုံနေရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
★ Acceptance (လက်ခံတာ) စိတ်ပင်ပန်းတာကို လက်ခံတာ။
ခန္ဓာကိုယ် ပင်ပန်းတာကို လက်ခံတာ။
မိခင်က ငိုနေတဲ့သားလေးကို ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ အခုအခါ ပင်ပန်းနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ငိုနေတဲ့ ကလေးလေးလိုပဲ။ mindfulness ခေါ်တဲ့ သတိနဲ့ အသိ။ သတိတရား။
★ ဒီ အချိန်မှာ တစ်ဦးတည်းသော သားရှိတဲ့မိခင်လို၊ တခြား ဘာမှ ဂရုစိုက်စရာမရှိဘူး။ ဂရုစိုက်ဖို့ မလိုဘူး။ ပင်ပန်းနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို Priority ထားလိုက်။ ပင်ပန်းနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာပဲ စိတ်ထား။ ၀င်လေ ထွက်လေ ကျကျနန ရှုရှိုက်ပေး။
★ ပင်ပန်းနေတာကို မပင်ပန်းအောင်ဆိုပြီး သွားမလုပ်နဲ့။ ပင်ပန်းနေတာလေးကိုပဲ လက်ခံလိုက်။ ငိုနေတဲ့ ကလေးကို ပွေ့ချီလိုက်၊ နှစ်သိမ့်လိုက်၊ အားပေးလိုက်။ နွေးထွေးမှုပေးလိုက်။
"မငိုနဲ့" ဆိုပြီးတော့ သွားပြီးတော့ မပိတ်နဲ့။ အားပေးရုံ အားပေး။ ကလေးက သူ့ဟာသူ အငိုတိတ်သွားလိမ့်မယ်။ မငိုနဲ့လို့ ပြောရင် ကလေး သူ့ဟာသူ ကြောက်ပြီးတော့ survival instinct ပုံစံမျိုးနဲ့ သူ react (တုံ့ပြန်) လိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီခန္ဓာကိုယ် ပင်ပန်းတာကို နားလည်ပေးလိုက်။ ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းနေတာကို လက်ခံပေးလိုက်။ ပင်ပန်းနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အတွက် ၀င်လေထွက်လေ ကျကျနန ရှုရှိုက်ပါ။
Posted by KYAW CHAN NYEIN at 12:35 PM